စံပြကမ္ဘာ ခြယ်ပစ္စည်း ရာသီဥတုမော်ဒယ်များ 2018-07-01 | 5
ယနေ့လမ်းညွှန်၏စာရေးသူသည်ပိုလန်နိုင်ငံမော်ဒယ်လ်မြင်ကွင်းတွင်ကျယ်ပြန့်စွာလူသိများသောပုံဖော်သူMirosław Serba ဖြစ်သည်။ ကား၏အောက်ပိုင်းအပိုင်းများကိုလွယ်ကူသောအဆင့်အနည်းငယ်ဖြင့်ထိထိရောက်ရောက်ပြီးအောင်လုပ်ရန်သူ၏လမ်းကိုသူပြလိမ့်မည်။
ဆီဆေး (van Dycke အညိုရောင်အရောင်),
ultra Matt vernic
နောက်တစ်ဆင့်မှာအရောင်ခြယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါ Ammo Mig အမှတ်တံဆိပ်အမှတ် 3007 DARK EARTH ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နေရာတိုင်းအတိအကျညင်ညင်သာသာထိပုတ်ပါ။
အခြားတစ်ခုမှာယခင်အလွှာတွင်ခြောက်သွေ့သောမြေသားခြယ်ပစ္စည်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီအတွက်ငါ Ammo - EUROPE EARTH palette ထဲကနံပါတ် ၃၀၀၄ ကိုရွေးခဲ့တယ်။
သင်ခြယ်ပစ္စည်းအသုံးပြုပြီးသည်နှင့်သင်ပုံမှန်ဆန်ခါခြောက်သွေ့သောမြေကိုအသုံးပြုရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ ဒုတိယတစ်ခုနှင့်တူသောကြမ်းတမ်းသောဖြူဟောင်းကိုသုံးပါ အဆိုပါခြယ်ပစ္စည်းဇာတ်စင်။
ဒါဟာ matte အရောင်တင်ဆီအလွှာများအတွက်အချိန်ပါပဲ
နောက်တစ်ဆင့်မှာအရောင်တင်ဆီသုတ်လိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော့်အမြင်အရ AK Interactive အမှတ်တံဆိပ်၏ဈေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးသေဆုံးသောအိမ်ထောင်ဖက်လာသည်။
မသေနိုင်သော ECO 1 ဝင်သည်
မြေတပြင်လုံးသွေ့ခြောက်ပြီးနောက်, မသေနိုင်သော Eco1 ဝင်။ ဒီအဆင့်မှာ, ငါယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ပါးလွှာရေချိုးကန်၏အောက်ပိုင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလျှောက်ထားပါ။ အောင်မြင်မှုတစ်ခုလုံးရေကြီးမှုမရှိဘဲ။
မီတာသငျသညျ Eco 1 အစားအဖြူဝိညာဉျကိုသုံးနိုင်သည်? သင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါမူတည်ပြီးတော့အဖြူရောင်မျက်လုံးလို့ခေါ်တဲ့အဖြူရောင်မျက်လုံးတွေခြောက်ပြီးတဲ့နောက်ထွက်လာမှာကိုကြောက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါမထောက်ခံဘူး။
ခြောက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီတစ်ခုလုံးကြည့်ရတာပေါ့။ ငါအစောပိုင်းကပြုခဲ့သောဤကုသမှုကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငါတို့စိတ်ဝင်စားဖို့အရောင်ပြောင်းခြင်းနှင့်သဘာဝ၏စှဲရ
လာမယ့်အဆင့်မှာငါဆီကိုသုတ်ဖို့အတွက်ဆီဆေးနဲ့ Eko1 ပါးလွှာမှုကိုသုံးမယ်။ ဤသည်ဆွဲဆောင်မှုနှင့်သာ။ ကြီးမြတ်သရုပ်မှန် add ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကုသမှုကိုလုပ်ဖို့သုံးသုညစုတ်တံကိုငါသုံးတယ်။ ငါရောပြီးဆေးသုတ်ထားသောဆီနှင့်အမဲဆီယိုစိမ့်နိုင်သည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ငါသည်လည်းလမ်းကြောင်းများထောက်ပံ့ဘီးဘားအောက်မှာကနေပါးလွှာသော trickle လုပ်။ :
တွေ့မြင်နိုင်သည့်အတိုင်းဆေးသုတ်ခြင်း၏အစောပိုင်းအဆင့်တွင်ဆီနှင့်အမဲဆီယိုစိမ့်သောနေရာများကိုသာကုတ်ခြစ်သည်။ ယိုစိမ့်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြမည့် Ammo မှသတ်သတ်မှတ်မှတ်တစ်ခု၏အကူအညီကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။
Mirosław Serba ၏နည်းပညာနှင့်အတူအဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောရေချိုးကန်ကိုအစွန်းအထင်းများကဤအတိုင်းပင်! ခံစားပါ
ဤသည်တပြင်လုံးကိုအရာတူပုံဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာရေချိုးကန်ရဲ့အောက်ခြေမှာဖုန်တွေဆောက်တာရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ပဲ။ ၎င်းသည်လူငယ်များနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါကဤလမ်းညွှန်တွင်ထည့်သွင်းထားသောအလုပ်အတွက် Mirek အားကျေးဇူးတင်ရန်မှတ်ချက်တစ်ခုချန်ထားခဲ့ပါ။
မော်ဒယ်ပေါ်ဖုန် ညစ်ပတ်တယ် အဆင့်မြင့်ဘို့ ရာသီဥတု Streaks
ရှေ့သို့ ယခင် post: လက်ကိုင်ပဝါနှင့်တာပေါ်လင်များ - အ dioramas မှထိရောက်သောဖြည့်စွက်
နောက်တစ်ခု: နောက်တစ်ခု သံလိုက်အပေါ်သံချေး - မော်ဒယ်အပေါ်စိတ်ဝင်စားဖို့အကျိုးသက်ရောက်မှုများလျင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူအောင်မြင်ရန်ဘယ်လို
ကောင်းစွာတင်ပြ, ယခုငါ try ကြိုးစားရန်ရှိသည်
မင်းရဲ့စိတ်ကူးအတိုင်းငါပထမဆုံးမော်ဒယ် (ကျား) ကိုလုပ်မယ်။
Diorama မော်ဒယ်တွေကိုထုတ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကိုငါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာသေချာတယ် washa, ဖုန်များနှင့်အမြတ်ထုတ်မှု၏သဲလွန်စများ, ယခုငါဒါကိုငါစသုံးပါလိမ့်မယ်
Patryk Manikowski သူကရေးသားခဲ့သည်:
Sebastian R. သူကရေးသားခဲ့သည်:
အေး။ အသိပညာ၏တစ် ဦး ကစစ်မှန်တဲ့ဘဏ္treာကို။ ငါပိုတောင်းသည်
မှတ်ချက် Add ပြန်ကြားချက် Cancel
သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ။ လိုအပ်တဲ့လယ်ကွင်းမှတ်သားထားသည် *
spam ကိုလျှော့ချရန်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည် Akismet ကိုအသုံးပြုသည်။ မှတ်ချက်ဒေတာကိုမည်သို့မည်ပုံဆောင်ရွက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုရှာဖွေပါ.
Miss Modellers ကမ္ဘာ့ဖလား!